Zaza Warmers Factory, Suppliers | China Zaza Warmers Manufacturers
Home » Products » Medical Fitaovana » Perinatal Care » zaza Warmers
Amin'ny maha-rafitra fikarakarana zavatra maro misokatra fanatitra vahaolana dia afaka miankina amin'ny, ny FXQ4A mahatonga ny asa Mora kokoa raha mitandrina ny fomba fiasan'ny aina. Ity sehatra fitsaboana haingana dia mamela anao ny valin'ny avo-mety tafiditra marary satria ny zava-drehetra tokony ho thermoregulation sy ny taovam-pisefoana resuscitation fanohanana nandritra ny fitsaboana. Ankoatra izany, ny famolavolana ny rafitra dia nalaina avy ny taona ny traikefa ho, nifoha maraina manaraka ny foto-kevitra ny fanomezana tsara indrindra ny marefo fikarakarana marary.
Ny vondrona FXQ4B no afovoany famolavolana ny zaza miramirana mafana amin'ny tsy manam-paharoa ho an'ny tontolo iainana mafana aloha loatra sy feno neonates-teny. Ankoatra izany, ny resuscitation Accessories dia mety ho voatery ny vondrona ao amin'ny vonjy taitra toe-piainana.
Ny fahafahantsika manome ny tsara indrindra ho an'ny zaza fikarakarana marary, ka mampihena ny fanerena eo amin'ny toe-javatra maika, na amin'ny Nicu.
Ny sampana FXQ4 manome ny tsara indrindra amin'ny fikarakarana ny tandrify ho an'ny zaza vao teraka thermoregulation marary rehefa any fitsaboana vonjy taitra na jaundice amin'ny rafitra fikarakarana misokatra.